Qaraxii Xooganaa ee Caawa Fiidkii Gilgilay magaalada Muqdisho (VIDEO)
Ciidamada gaar ah ee qaabilsan illalada Madaxtooyada Qaranka ayaa isla caawa fiidkii soo gabagabeeyay halgalladii ay kaga hortagayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday baro koontarool oo laga soo galo xarunta Madaxtooyada.
Ciidamada ayaa xaqiijiyay inay toogasho ku dileen ilaa shan ka tirsan ciidamadsii Al-Shabaab oo soo xirtay darees loo ekeysiiyay kuwa ciidamada amniga Qaranka, waxaana labaka mid ah lagu dilay bar koontarool oo ciidamadu ay ku leeyihiin Taalada Sayidka, halkaasi oo ay xoog ku soo mareen markii ay ciidamadu ka shakiyeen.
Gaari walxaha qarxa lagu soo xiray oo ay wateen maleeshiyada ayaa ku qarxay meel u dhaw Taalada Dhagaxtuur, kaasi oo ay ciidamada jooga Sayidka ku guuleyteen inay taayarada ka banjariyaan ka hor inta uusan ka soo gudbin halkaasi, waxaana saddexdii kale ee gaariga saarneyd lagu toogtay aga gaarka Hotel Siyaad, kuwaasi oo doonayay inay xoog ku soo maraan barciidan oo kale.
Khasaaraha weerarkii caawa ayay laamaha ammaanka ku sheegeen inay gaareyso 10 qof oo shan ka mid ah ay yihiin maleeshiyaadka Al-Shabab, halka shanta kale ay ahaayeen shacab goobahaasi ka agdhawaa.
Qarax Caawa ka Dhacay Magaalada Muqdisho 21-12-18 (SAWIRRO) December 21, 2018